helloSystem, kugovera kunoshandisa FreeBSD, kunoita kunge macOS uye kunobva kune munyori weAppImage | Linux Vakapindwa muropa
Simoni Petro (iye mugadziri weAppImage yakamira yega package package) akazivisa Mazuva mashoma apfuura ndiani arikugadzira kusimudzira kwekugovera kutsva kunonzi "helloSystem".
mhoroSystem yakavakirwa paFreeBSD uye ine yakagadzirirwa interface inoyeuchidza MacOS. Sisitimu yekuvandudza haisati yakwana izvozvi, asi mifananidzo yebhoti iri kutogadzirwa kuyedzwa.
Kugovera inovandudzwa zvinoenderana nemutemo we "zvishoma asi zvirinani" uye yakaiswa sehurongwa hwevashandisi vese, kune avo vanoda macOS vasina kugutsikana nemaitiro eApple vanogona kuchinja, vachiisa mhinduro uye vakasungirirwa kune mumwe mugadziri.
Mhoro (inozivikanwawo seheroSystem) inogadzira desktop desktop iyo inotarisana nekureruka, runako, uye nyore kushandisa. Dhizaini yayo inotevera huzivi "Zvishoma, asi zvirinani". Inoitirwa sisitimu ye "vanhuwo zvavo", vanogamuchira vashanduri veMac. MaharaBSD inoshandiswa senhare yekushandisa.
Iyo sisitimu haina matambudziko anowanikwa muazvino Linux kugovera, iri pasi pekutonga kuzere kwemushandisi uye inobvumira vaimbove vashandisi veMacOS kuti vanzwe kugadzikana.
Iyo interface inoenderana nepfungwa yekushandisa iyo yepasirese menyu, iyo panda-statusbar package yakagadziridzwa neCyberOS yekuparadzira kit (yaimbove PandaOS) inoshandiswa kugadzira menyu yepasirese uye bar yemamiriro.
Iyo Dock yakavakirwa pane cyber-dock chirongwa, zvakare kubva kune vagadziri veCyberOS. Kugadzirisa mafaera nekuisa mapfupi padesktop, iyo Filer faira maneja, yakavakirwa pcmanfm-qt kubva kuLXQt chirongwa, iri kuvandudzwa. Iyo default browser ndeye Falkon, asi Chromium inowanikwa senge sarudzo.
Kugoverwa uku kunoshandisa VhuraZFS seye default faira system uye yako desktop desktop inonzi helloDesktop, iyo ine echinyakare windows, yakakosha desktop dock, yakasarudzika yepasirese menyu uye maneja wefaira zvichibva paPCManFM (kubva kuLXDE chirongwa).
Iyo purojekiti iri kuvandudza nhevedzano yezvivakwa zvekushandisa, senge yekumisikidza, yekumisikidza, yekuchengetera yekushandisa yekumisikidza mafaera mumuti weFS, chishandiso chekuwanazve dhata kubva kuZFS, chinongedzo chekuparadzanisa ma diski, network yekumhanyisa kukurumidza, chishandiso chekugadzira zvidzitiro, Zeroconf server browser , mureza wekumisikidza vhoriyamu, chinoshandiswa kumisikidza boot nharaunda Zvekuvandudza, mutauro wePython uye raibhurari yeQt zvinoshandiswa.
Kana ari kusarudzwa kwesoftware, tinogona kuwana en helloSystem dzakasiyana siyana dzakakurumbira maficha, senge: LibreOffice, Chromium, GIMP, Scribus, Inkscape, pakati pemamwe mafomu akakurumbira.
Kuvhura mashandisiro, iyo utility utility inoshandiswa, iyo inowana iyo chirongwa uye inoongorora zvikanganiso panguva yekuitwa. Kuvakwa kwemifananidzo mhenyu yesystem kunoenderana nemidziyo yeiyo FuryBSD chirongwa.
Zvinhu zvakatsigirwa zvekusimudzira mashandisirwo, mukuburuka kwekuda kwekuda, ndePyQt, QML, Qt, KDE Frameworks, uye GTK.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve helloSystem, unogona kutarisa yavo webhusaiti mukuru mune inotevera chinongedzo.
Kana kune rimwe divi, kune avo vanofarira kugona kuyedza system pasi pemuchina chaiwo kana pamakomputa avo, vanogona kuwana mufananidzo weiyo system kubva pane iyi link iripazasi.
Izvo zvakakosha kuti utarise zvinotevera zvinotevera zvinodiwa kuti utange sisitimu:
64 GHz mbiri-musimboti 2-bit Intel / ARM processor
4 GiB ye RAM (system memory yekuisirwa kwepanyama uye yemweya)
VGA ine resolution ye 1024 × 768
Pamwe CD / DVD dhiraivha kana doko re USB kutanga iyo yekuisa midhiya
Ichiri chehurongwa hwekuona:
Mushandisi chaiwo anofanira kunge ari 64 matomu
Mushini chaiwo unoda ingangoita 4 GB ye RAM
Maitiro ebhutsu anotora nguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa; bhuti mu verbose mode kuti utarise ruzivo
Kuti uwane mhedzisiro, seta boot mode EFI / UEFI (kwete BIOS)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » helloSystem, kugovera kunoshandisa FreeBSD, kunoita kunge macOS uye kunobva kune munyori weAppImage
John James akadaro
ZVAKANAKA danho, ini ndinoda FreeBSD uye zvino neprojekti iyi ndinofunga zvakanaka!… Kuti vanoshandisa OpenZFS zvakare zvinoita kunge Zvakakura !!! .. chirongwa ichi chinounza pamwechete mazano akanaka kwazvo uye akanakisa efilosofi yega yega maererano nemhando / usability.
Pindura kuna John James